Saliida CBD eeyaha: Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Milkiilayaasha Eyga • Daroogada Inc.eu
Saliida CBD eeyaha: Tilmaamaha ugu dambeeya ee Milkiilayaasha Eyga
CBD saliida eeyaha ayaa caan ku noqotay milkiilayaasha xayawaanka sababtoo ah daaweynta badan ee cudurada qofku ka heli karo isticmaalkiisa. CBD waxay isbeddel ku sameysay adduunka daryeelka xayawaanka.
1 Marabtaa inaad aragto waxa saliida xashiishku sax tahay?
2 Sidee Saliida Cannabis U Caawin Kartaa Eeyahaaga?
3 Saliida CBD eeyaha leh dhibaatooyinka dhaqdhaqaaqa
4 Saliida CBD ee xanuunka
5 Saliida CBD si ay u dajiso xayawaankaaga
6 Saliida CBD ee suuxdinta suuxdinta
7 Gabagabeynta ku saabsan saliida CBD eeyaha
Saliida CBD waxay caan ku tahay milkiilayaasha xayawaanka ah ee guryaha bogsiinaya iyo la'aanta waxyeellooyin. Baarayaasha waxay ogaadeen in isticmaalka saliida CBD ay waxtar u yeelan karto daaweynta dhibaatooyinka jirka iyo dabeecadda eeyaha. Sidaa awgeed, khubaro aad u tiro badan oo caafimaadka xoolaha ah ayaa kula talinaya saliida CBD milkiilayaasha xayawaanka.
Marabtaa inaad aragto waxa saliida xashiishku sax tahay?
Warshadda xashiishka ee laga soo saaray saliida Cannabis waxay ku timaadaa laba nooc: CBD sare iyo sare THC. Mid kastaa wuxuu ka kooban yahay waxyaabo badan oo gaar ah cannabinoid. Waa isku-darka kiimikada ee la falgala kuwa wax qabta ee ku jira jirka xayawaanka si loo abuuro saameyn badan.
Saliida xashiishka oo leh mid sare THCwaxa ku jira maadada tetrahydrocannabinol oo aad u tiro badan (THC). Halka saliida xashiishka leh maadada sare ee CBD ay kujirto qadar aad u badan oo ah CBD ama cannabidiol ka kooban yahay. Laakiin CBD, si ka duwan THC, ma keento in xayawaankaaga aad dareento sarre. Taasi waa sababta alaabooyinka ka kooban THC gabi ahaanba laguugula talin karin xayawaankaaga, si ka duwan CBD-da aadka u nabdoon.
Sidee Saliida Cannabis U Caawin Kartaa Eeyahaaga?
Dhibaatooyin caafimaad oo badan ayaa lagu daaweyn karaa saliidda CBD. Raadin yar oo internetka ah iyo cilmi baaris ayaa muujineysa sababo fara badan oo milkiilayaashu u isticmaalaan saliida CBD eeyaha ama asxaabtooda. Waxaan hoos ku taxnaa dhowr ka mid ah:
Dhibaato wada jir ah oo la xiriirta da'da
Kala Welwelka ama Kalidaa ahaanshaha
Murqaha ama suuxdinta
Cabsida sawaxanka weyn sida onkodka, rashka, iwm.
Dabeecad dagaal ku dhisan eeyaha kale
Cuncun joogto ah oo ka yimaada sababaha keena ama xasaasiyadda
Waxay ka caawisaa soo kabashada fudud ee qalliinka
Awood la'aan nasasho
Taageerada Dhaqaaqa eeyaha Waayeelka ah
Lalabbo gaari dheer
Saliida CBD eeyaha waxay kaa caawin kartaa dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan (afb.)
Saliida CBD eeyaha leh dhibaatooyinka dhaqdhaqaaqa
Warbixinadu waxay muujiyeen in ugu yaraan 20% eeyaha ay la kulmi doonaan cilad-xumo ama xanuun isku-dhafan oo isku-dhafan oo heer nololeed ka mid ah. Sabab kasta ha noqotee. Ha ahaato gabow ama hiddo. Xanuunka ku bilaabma raaxo-darrada khafiifka ah badanaa aakhirka wuxuu noqdaa cilad xanuun joogto ah. Tani waxay yareynaysaa tayada noloshooda waxayna ka horjoogsanaysaa xayawaanka wehelka u ah inay qabtaan howlaha ay ka helaan.
Daaweynta caadiga ah sida jimicsiga, maaraynta culeyska, xanuun joojiyaha, qalliin ama irbado istiraatiijiyadeed ayaa kaa caawin kara yareynta xanuunka eeygaaga ilaa xad. Laakiin ma noqon karto mid ku habboon eey kasta. Intaa waxaa dheer, daaweynta caadiga ah kuma siin karto xal waara oo wax ku ool ah. Vets waxay ugu yeeraan saliida CBD hab amaan ah oo lagu daaweeyo xanuunka wadajirka ah iyo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa eeyaha. Waxaa jira a tirada dib u eegista inaad ka akhrisan kartid waxyaabaha la soo jeediyey.
Saliida CBD ee xanuunka
Saliida CBD waxay bartilmaameedsaneysaa qaybaha kala duwan ee jirka eygaaga iyada oo loo marayo qabtayaasha endocannabinoid. Sidaa darteed, waxay kaa caawin kartaa yareynta caabuqa aan caadiga ahayn ama xanuunka neerfaha la xiriira. Saliida CBD waxay sidoo kale wax ku ool u tahay daaweynta ganaca daran ee sababa calool xanuun degdeg ah xayawaankaaga, oo ay weheliso matag iyo xitaa rabitaanka cuntada oo yaraada. Saliida CBO waxay ugu baaqeysaa nidaamka difaaca jirka inuu kiciyo jawaabta saxda ah sidaasna jirka ugu soo celiyo isku dheelitirnaan.
Saliida CBD si ay u dajiso xayawaankaaga
Vets waxay inta badan kugula taliyaan saliida CBD eeyaha la kulma walaac sababao kala duwan awgood, sida culeyska guud, cabsida ama walaaca kala tagga Saliida CBD waxay ku dajineysaa xayawaankaaga xayawaanka iyada oo loo marayo habka isgaarsiinta ee udhaxeeya endocannabinoid receptors. Waxaa lagu sameeyaa iyadoo la kicinayo soo-dhoweynta si wanaagsan loogu wareejiyo kiimikada. Saliida CBD waxay u sahlaysaa jirka inuu isdejiyo oo uu nasiyo.
Saliida CBD waxay kaloo ka caawisaa daweynta walwalka xaalada halka milkiilaha xayawaanku uu horey u ogaa in xaalad gaar ah ay ku sababi doonto walaac eygiisa. Xaaladahan waxaa ka mid ah booqashada xafiiska xannaanada xoolaha, onkodka, u daynta eygaaga keligiis maalinta oo dhan, ama booqde joogto ah. Maaddaama milkiiluhu horey u sii ogaa in xaaladahaani ay u badan tahay inay ku keenaan walaac xayawaankiisa, isaga / iyadu waxay siin karaan eeyga saliidda CBD xitaa ka hor inta aysan xaaladda dhabta ahi dhicin si ay uga caawin karto eyga inuu si fiican ula macaamilo xaaladaha noocaas ah.
Saliida CBD ee suuxdinta suuxdinta
Cilmi baaris iyo warbixino ayaa muujiyay in ku dhowaad 5% eeyaha ay lahaan doonaan suuxdin inta ay nool yihiin. Dabcan waad aadi kartaa daawada lidka ku ah daawada lidka ku ah daawada ee badanaa ay isticmaalaan milkiileyaal badan oo xayawaan ah. Laakiin sida laga soo xigtay warbixinnada macaamiisha, dawada ka hortagga suuxdintu waxay ka caawisaa ka hortagga astaamaha suuxdinta ee bukaannada aadanaha. Si kastaba ha noqotee, tirakoobka eeyaha wali lama hayo. Laakiin haddii aad raacdo dukumiintiyada milkiilaha eeyga, waxay muujineysaa qaab isku mid ah oo ku saabsan daroogada.
Marka daawooyinka caadiga ahi ay noqdaan kuwo aan waxtar lahayn ama leh dhibaatooyin badan, milkiilayaasha eeyaha ayaa doorta inay iibsadaan saliida CBD si ay uga caawiyaan eeyahooda inay ka nastaan ​​qallalka. Saliidda CBD-ka ee hemp-ka ayaa u eg inay ka hortagto astaamaha suuxdinta inay la wareegto maskaxda. Sidaa darteed, markii la siiyo saliidda CBD ee suuxdinta, eeyaha badanaa waxay la kulmaan qalal ka yar intii hore.
Gabagabeynta ku saabsan saliida CBD eeyaha
Saliida CBD eeyaha sida kor ku xusan waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh daaweynta xaaladaha caafimaad ee badan eeyaha. Faa'iidooyinka badan ee isticmaalka saliida CBD waxay ka dhigtay xulasho caan ah milkiileyaal badan oo xayawaan ah iyo xitaa dhakhaatiirta xoolaha ee Maraykanka, tusaale ahaan, waxay kugula talinayaan isticmaalkeeda.
Diidmo: qodobkani waa mid xog-ogaal u ah oo macnaheedu yahay ujeedku inuu si fudud ugu dhiirrigeliyo isticmaalka alaabada CBD. Had iyo jeer la tasho dhakhtarkaaga xoolaha oo hubi inaad si ku filan kuugu wargalisay ka hor intaadan tixgelin inaad u isticmaasho CBD eeyaha ama xayawaanka wehelka u ah!
CBDsaliid cbdxayawaankacaafimaadkacilmi baarisTHC
FDA (ee Maraykanka) ayaa maanta dhageysi ku saabsan ku saabsan CBD: waxa aad u baahan tahay inaad ogaato
Ka dib sharciyeynta CBD ee ku saleysan hemp heer federaal ee Mareykanka ...
CBD iyo daaweynta sonkorowga
Saliida hemp ee laga soo saaray warshada xashiishka ayaa hada heleysa warbixino wanaagsan oo ku saabsan awooddeeda ...